एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती !
कुनै पनि मानिसको श्रीमती कति जना होलान् । अवश्य पनि एक जना । किनकी कुनै मानिस बरु पटक पटक धेरैसंग प्रेममा पर्न सक्छ । तर जीवन काट्ने साथी अर्थात श्रीमती भने एक मात्र हुन्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
छाती बचाउनु नै काे-राेना बाट बाँच्नु हो´ यस्ता लक्षण र बच्ने उपायहरु,